राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा दर्ता गरेर कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अर्थनीति > राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा दर्ता गरेर कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले कुनै पनि पुराना तथा नयाँ आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा दर्ता गरेर कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७ औं बैठकपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कंडेलले कुनैपनि आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा दर्ता गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले कुनैपनि योजना बजेट किताबमा राख्न पाए उपलब्धी ठान्ने प्रवृतिको अन्य गर्न आयोजना बैंक स्थापना गरिएको समेत बताउनुभयो । उहाँले आयोजना बैंक पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएपछि तयारी अवस्थामा भएका परियोजना मात्रै बजेटमा स्थान पाउने र कार्यान्वयनमा जाने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणापत्र र मार्गदर्शन तयार भइसकेको जनाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रारम्भिक सफ्टवेरको विकास गरी विवरण प्रविष्टि भइरहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै उपाध्यक्ष कँडेलले तयारी बिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएकालो आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजान समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाँले एमसीसी परियोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत, पश्चिम सेति, निजगढ विमानस्थल, पशुपति क्षेत्र विकास समिति लगायका परियोजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण योजना बिना नै घोषणा गरिनु रहेको बताउनुभयो ।
२०७६ माघ २६ गते २२:०९ मा प्रकाशित
एनएमबि बैंकले कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्ने
स्नातक र प्रमाणपत्र तहको परीक्षा असार २३ देखि (तालिकासहित)
प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा क्रिसमसको शुभकामना
६० वर्षीय महिलाले जुम्ल्याह बच्चा जन्माएपछि ….
हिमालय ऊर्जा कम्पनीको आइपीओ खुल्ला, कति कित्तासम्म पाईन्छ भर्न ?
साढे दुई अर्बको ऋणपत्रका लागि कृषि बैंकले पायो सुरक्षित रेटिङ, व्याज कति ?